​सोधौं न, तिमीहरूले देशलाई के दियौ ?
Tuesday, 30 Aug, 2016 12:05 AM
डा. प्रदीप भट्टराई ।
नसोध तिमीलाई देशले के दियो
सोच तिमीले देशलाई के दियौ ?
अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीको बहुचर्चित भाषण आस्क नस्ट ह्वाट योर कन्ट्री क्यान डु को नेपाली भावानुवाद हो यो । संसारभरकै ठूला राजनेताहरू यही प्रश्नका साथ आफ्ना सम्बोधनहरू अन्त्य गरेर जनतालाई राष्ट्रका लागि केही गर्न अभिप्रेरित गर्छन् । राष्ट्रभक्ति जगाउन प्रयोग गरिने यसको जोडा भनाइ पाउन मुस्किल मात्र हैन, लगभग असम्भव नै छ ।
नेपालमा पनि राणाशाहीविरूद्ध प्राणको आहूति दिने चार शहीद गंगालाल, दशरथ चन्द, धर्मभक्त र शुक्रराज शास्त्रीको शहादतको सम्मानका लागि यस्तै भाव बोक्ने भनाइ प्रयोगमा ल्याइन्थ्यो । अघिल्लो पुस्ताका केही राजनेताहरू ठ्याक्कै यही प्रश्न नगरे पनि यस्तै आशयका प्रश्नहरू आफ्ना सम्बोधनमा प्रयोग गर्ने गर्थे । पुष्षलाल, वी पी कोइराला, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारीले आफ्ना सम्बोधनमा यस्तो प्रश्न गर्दा जनता अभिप्रेरित हुन्थे र मुलुकका लागि केही गर्ने संकल्प गर्थे । अहिलेका धेरै राजनीतिक नेतामा पनि उनीहरूले गरेको प्रश्नको धमिलो याद नहोला भन्न सकिन्न ।
समय सधैं एकनास कहाँ रहँदो रहेछ र ? अहिलेको नेपालमा यस्तो प्रश्न सोध्ने नैतिक आँट भएको राजनेता पाउन लगभग असम्भव छ । यसो भन्नका लागि आफूले पनि राष्ट्रबाट केही नलिई निस्वार्थ भावनाले केही गरेको मान्छे हुनुपर्‍यो ? अरूलाई अर्ति दिन आफू पनि त्यसका लागि योग्य र नमूना हुन सक्नुपर्‍यो । त्यागको संस्कृति हराउँदै गएको यो मुलुकमा अब यस्तो प्रश्न सोध्ने साहस कुन नेताले गर्ने ? कसैले लाज पचाएर सोधिहाले भने पनि तुरून्तै मानिसले जवाफ फर्काइहाल्ने अवस्था छ, नेताजी कहिलै सोच्नुभएको छ यहाँले चाँहि देशलाई के दिनुभयो ?
केही समययता मुलुकमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी कसलाई भन्ने र कसकसलाई के के सुविधा दिने बारेमा लामै बहस भएको थियो । बहसमा जनताको सार्थक उपस्थितिका कारण पूर्व पाँच (बिग फाइव ) पदाधिकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई मात्र विशिष्ट सुविधा दिने सिफारिस गर्न संसदको समिति बाध्य भएको थियो । तर, अझै पनि त्यो सिफारिस सरकारकै कोर्टमा भएकाले कुनै पनि बेला त्यसमा अरू पनि थपिएर नआउला भन्न सकिन्न । जनता र पत्रकारिताको लगातार पहरेदारी भयो भनेमात्र त्यो सिफारिस त्यही रूपमा आउला भनेर ढुक्क हुने स्थिति बन्न सक्छ ।
हाम्रो मुलुकमा आफ्नै हात जगन्नाथ गर्ने अपसंस्कृतिको बेलावाला छ । मुलुकको विधान बनाउने विधायकहरू आफ्नै हितका लागि विधान बनाउँछन् र त्यसैबाट मुलुकको दोहन गर्छन् । सांसद विकास कोष, औषधोपचार यस्ता केही क्षेत्र हुन् जसलाई लैनो गाई बनाएर सांसदहरू मुलुकको दोहन गरिरहेका छन् । अझ कार्यपालिकामा पुग्नेहरूले त क्याविनेटलाई कसैले छुनै नसक्ने बनाएर मनपरि गर्ने गरेका छन् । कसैप्रति जवाफदेही नै हुन नपर्ने बनाएर लूटतन्त्र मच्चाएका छन् । प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्रमा पदोन्नति भएको २१ औं शताब्दीको राज्य व्यवस्थामा पनि यस्तो हुन्छ भन्दा भन्नेहरूलाई केही नभए पनि सुन्नेहरूलाई नै लाज हुने अवस्था छ ।
नेपालमा यो वा त्यो नाममा राज्यको दोहन गर्ने लूटतन्त्र नै चलेको छ । कसले गर्‍यो भन्दा पनि कसले गरेन ? भन्ने खालको अवस्था छ । राज्यदोहन गर्ने अवस्था वा पदमा पुगेपछि ठाडै प्रश्न गरिन्छ, फलानाले गर्दा हुने, हामीले गर्दा चाँहि किन नहुने ? अझ अगाडि बढेर भन्ने गरिन्छ, हामीले गरिखाएको देख्न नसक्ने ?
यो अवस्था आलोपालो सबैका लागि हुन्छ । सत्तामा रहुञ्जेल सत्तारूढ पार्टीका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म आआफ्नो हैसियत अनुसार राज्यको स्रोत र साधन दोहन गर्छन् । सत्ता बाहिर रहनेहरू राज्य दोहन गरेको देख्छन् र त्यसको विरोध गर्छन् । जब स्थिति योभन्दा ठीक फरक हुन्छ, सत्ता बाहिरका सत्तामा जान्छन् र सत्तामा रहेकाहरू बाहिर आउँछन् । फेरि, पर्म गएजस्तो गरेर हिजो दोहन गर्नेहरू विरोध गर्न थाल्छन् र दोहनको विरोध गर्नेहरू दोहन गर्न थाल्छन् । अझ पछिल्लो समयमा त मुलुक संक्रमणमा छ भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उरालेर भागशान्ति लगाएर दोहन गर्ने क्रम जारी छ । छिटोछिटो फेरिने सरकारका कारण दोहन गर्ने म्युजिकल चियर पनि छिटो गतिमा चलिरहेको छ । सरकार गए पनि अदालतको नजीर तेस्र्याएर राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरू पनि आफ्नो दोहन काललाई बढाइरहेकै छन् ।
अर्थात् मुलुकमा राष्ट्रिय दोहन संस्कृतिको विकास भएको छ । प्रहरी, सेना, अदालत, कर्मचारीतन्त्र, पत्रकारिता, नागरिक समाज, उपभोक्तालगायका सबै तह र तप्का अति राजनीतिक ध्रुवीकरणको शिकार भएको छ । त्यसैले यहाँ राष्ट्रिय दोहन संस्कृतिको पक्षपोषण र विरोध गर्ने भिजिलान्ते संस्कार हावी छ । जनबर्गीय संगठन, भातृ तथा भगिनी संस्था, विचार समूह आदि इत्यादिका नाममा हरेक तह र तप्कामा भिजिलान्तेहरूको खेती जारी छ ।
यो क्रम बढ्दै गएर अहिले पूर्व विशिष्टहरूको औषधोपचारमा आइपुगेको छ, त्यो पनि स्वदेशमा हैन विदेशका महंगा अस्पतालमा हुने औषधोपचार । यतिबेला, मुलुकका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र केपी शर्मा ओली विदेशमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न गएको गजबको संजोग जुरेको छ । र, केही दिनमै पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि स्वास्थ्य परीक्षणकै लागि विदेश जान खुट्टा उचालेका छन् ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला थाईल्याण्डको बैंककमा छन् भने पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा सिंगापुरमा । उनीहरू उपचारका लागि मात्र हैन, सपरिवार भ्याकेसनका लागि पनि त्यहाँ पुगेका हुन् । दुबै नेताहरू केही समयअघि सत्ता राजनीतिमा लिप्त भएका कारणले केही गलेको अवस्थामा रहेको जगजाहेर छ ।
मुलुकका यी पूर्वविशिष्ट रोगी भएको सबैलाई थाहै छ । उनीहरूले राष्ट्रको ढुकुटीबाटै उपचार गराएर राष्ट्रसेवा गरिरहेका छन्, यो ओपन सिक्रेट हो । किनकि, उनीहरूले एकपटकमा १५ लाखसम्म उपचार खर्च लिने त नियमावली नै बनाएर राष्ट्र दोहन गर्दै आएका छन् । तर, यथार्थ के छ भने उनीहरूले त्यसको ठाउँमा क्याविनेटमा निर्णय गराएर करोडसम्म लिने गरेका छन् । किनकि, उनीहरूले जति दाबी गरे पनि भुक्तानी दिने गरिएको छ । यसबाट आफ्नो उपचार मात्र हैन, परिवारका सबै सदस्यको उपचार र एक दुई वर्षको पकेट खर्च पनि जोहो हँुदै आएको छ । अर्थात्, यो पनि एक किसिमको व्यवसाय नै भएको छ ।
यो उपचार खर्च लिन मेडिकल बोर्डले नेपालमा उपचार सम्भव छैन भनेर सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो सिफारिसका आधारमा अस्पतालले उपलव्ध गराएको बिलअनुसारको भुक्तानी त्यो पनि बढीमा १५ लाखसम्म दिने प्रावधान छ । तर, पहिला पनि र अहिले पनि यी प्रावधानहरूको पालना गरिएको छैन । न मेडिकल बोर्डको सिफारिस, न अस्पतालको बिल न भुक्तानीको सीमा । सबै ठाउँमा आफ्ना कार्यकर्ता हुने र एकले अर्कालाई गुन लाउनुपर्ने भएकाले उनीहरूले भनेअनुसारको बिलको पैसा निवासमै हाजिर हुने अवस्था छ ।
अब प्रश्न उठ्छ यसपटक के होला ? यी दुबै पूर्वप्रधानमन्त्रीले मुलुकमा उपचार सम्भव नभएको भनेर मेडिकल बोर्डको सिफारिस लिएका छैनन् । सिफारिस नै नलिएपछि के प्रमाणित हुन्छ भने उनीहरूको मुलुकभित्रै उपचार सम्भव थियो, आफ्नै रहरले उपचारका लागि विदेश गएका हुन् । यस्तो अवस्थामा अब उनीहरूले बढीमा १५ लाख उपचार खर्च लिने नैतिकता रहन्छ ? नरहनुपर्ने हो तर परम्परा हेर्दा यसपटक पनि पहिलाको जस्तै १५ लाख हैन, त्यसको तेब्बर चौब्बर भुक्तानी नहोला भन्न सकिन्न ।
वास्तवमा विगतमा जे भयो त्यो पनि ठीक थिएन । अब त यो वहसको विषय पनि बन्यो, जनता पहिलाभन्दा थप सुसूचित पनि भए । हाम्रा यी दुबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू आफ्नो उपचारका लागि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने तन्नम अवस्थामा पनि छैनन् । तन्नम नै भए भने पनि यी नेताहरू मुलुकका १ नम्बर २ नम्बर पार्टीका प्रमुख हुन् । उनीहरूका पार्टी धनी छन्, कार्यकर्ता पनि मोटाइसकेका छन्, उनीहरूबाटै उपचार पनि सम्भव छ ।
यस्तो अवस्थामा उनीहरूले के गर्लान् ? फेरि १५ लाख लेलान् ? या त्यसको चौब्बर लिएर अरू एक वर्षको पकेट खर्च पनि जोहो गर्लान् ? हेर्न र खबरदारी गर्न जरूरी छ ।
यसपटक उनीहरूले फर्केर आउँदा त्रिभुवन विमानस्थलमा हामीले यसपटक आफैं आफ्नो उपचार गरेका हौं । राष्ट्रको ढुकुटीबाट एक पैसा पनि लिदैनौ । बरू त्यो पैसा कर्णालीमा सिटामोल पनि खान नपाएका गरीव नेपालीका लागि सदुपयोग होस् । यसो भन्ने आँट गर्छन् कि गर्दैनन् । यदि त्यसो भने भने हामी पनि भन्न सक्ने अवस्थामा हुनेछौं
नसोध देशले तिमीलाई के दियो
हैन भने, राष्ट्रिय दोहनको यो संस्कृतिलाई मनैदेखि घृणा गर्दै भन्नुपर्ने हुन्छ, कुरी कुरी नेताहरू, लज्जा शरणम् । आगे,उनीहरुकै मर्जी ।
​पोखराको ३० र ३१ नम्बर वडामा एमालेको जित
​पाराडाइम सिफ्टको संघारमा चलचित्र
​कसलाई पठाउने भारत : प्रधानमन्त्री कि प्रचण्ड ?
​आगे, के होला मुलुकको ?... रामजाने
​अमेरिकामा भाइरल हुँदैछन् विनोद चौधरी